Meesha Baaskiilka, Baska, Raacista iyo Baarkinka ee Bandhiga Farshaxanka Columbus 2022 - Columbus Arts Fest
Meesha Baaskiilka, Baska, Raacista iyo Baarkinka ee Bandhiga Farshaxanka Columbus 2022
COLUMBUS, Ohio — Ku dhawaad ​​450,000 oo qof ayaa ka soo qayb gala Bandhig faneedka Columbus, kaas oo noqday magaalada "ku soo dhawoow xagaaga". Iyada oo dad badan oo sidaas oo kale ah iyo waddooyinka xiran si ay u dejiyaan farshaxan wanaagsan iyo farshaxan wanaagsan oo ka yimid in ka badan 200 oo fannaaniin heer qaran iyo heer qaran ah, saddex marxaladood iyo dhammaan cuntooyinka kale ee weyn iyo madadaalada ay keento xafladda, halkan waxaa ah qaar ka mid ah beddelka gaadiidka, iyo sidoo kale baarkinka xog.
Bike: Iyadoo leh waddooyin badan oo baaskiillo ah iyo waddooyinka Scioto Greenways, baaskiil wadida xaflada waa sahlan tahay. Marka laga soo tago baarkin baaskiil oo ku filan hareeraha webiga, Festival-gu waxa ay iskaashi la samaysay Columbus Bike Valet, oo ay iska kaashadeen Franklinton Cycle Works iyo Not Us Urban Scouts, si ay u bixiyaan baarkin bilaash ah baaskiilka inta lagu jiro saacadaha Damaashaadka. Baarkinka baaskiilka waxaa laga heli karaa 400 West Rich gated lot, oo ku yaal meel ka baxsan Rich Street, oo dhanka galbeed ka xigta Masraxa Muusikada Maxaliga ah ee Weyn.
Waxa kale oo jira baaskiilada CoGo ee:
South Front Street waqooyiga ee Town Street
Washington Boulevard iyo West Broad Street
Waddada Galbeedka Magaalada ee Lucas Street
Bus: COTA waxay joogsataa hareeraha Wadooyinka Sare, Hore iyo Balaadhan ee magaalada hoose. Macaamiisha xaflada waxay sahmin karaan dariiqyada ugu wanaagsan ee lagu tagi karo Bandhiga Farshaxanka ee Columbus COTA.com. Qiimaha deegaanka waa $2, ama ku iibso kaadhka maalintii $4.50. Rakaabku waxay ku bixin karaan lacag caddaan ah (isbeddel sax ah oo keliya) ama soo dejinta COTA's Transit app: cota.com/transitapp.
la dhigtoBaarkinka waxaa laga heli karaa meelo badan oo dushiisa ah oo bari iyo galbeed ka xiga wabiga oo laga heli karo dukaanno lacag ah (goobo hore loo mitir ahaa) oo ku yaal waddooyinka magaalada ku hareeraysan iyo garaashyada gudaha magaalada hoose iyo agagaarka Franklinton, oo ay ku jiraan:
Garaashka cusub ee Scioto Peninsula oo laga heli karo Broad ilaa Starling
Garaashka Commons Columbus
Garaash RiverSouth ee Front iyo Rich
Garaashka LeVeque Tower ee ku yaal Broad and Front
Xusaska Halgamayaasha Qaranka & Matxafka badan (oo dhan ka socda COSI)
Garaash dhulka hoostiisa ah ee Scioto Peninsula (galbeed ee COSI, oo hoos yimaada Dorrian Green)
Garaash webiga iyo Rich ku yaal Rich iyo McDowell
Dabaaldegga-joogayaashu waxay kaydsan karaan baarkinka iyagoo dhex maraya ParkColumbus halkan: parkcolumbus.parkmobile.io/venue/bicentennial-park/dhacdooyinka
ISBEDELKA MUHIIMKA AH EE BAARdhigga mitirka: Magaalada Columbus ayaa meesha ka saartay mitirada baarkinka waxayna ku bedeshay baarkinka mobilada iyo dukaamada. Markaad dhigato baabuur waxaad ka bixin kartaa dukaanka kuugu dhow ama qalabkaaga gacanta adoo soo dejisanaya ParkColumbus app Dukaanka Apple App or Google Play, fariinta "park" u direysa 77223 ama sawirida koodka QR ee laga helay calaamada magaalada hoose.
App-ka ParkColumbus kaliya ma bixiyo hab sahlan oo wax lagu bixiyo balse wuxuu muujinayaa meesha baarkinku yaalo, wuxuuna martida u soo diri karaa ogeysiis qoraal ah marka wakhtigoodu dhamaado. Fadlan ogow in aan ku meel gaadh ah lahayn calamadaha baarkinka waa in la addeeco xiitaa hadii abka uu tuso aaga in la heli karo.
Kuwa wata boorarka baarkinka ee naafada ah, meelaha dukaamada ayaa laga heli karaa dhanka bari ee Civic Centre Drive inta u dhaxaysa Magaalada iyo Wadooyinka Balaadhan.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan gaadiidka lagu aadayo Bandhig faneedka Columbus waxaad ka heli kartaa at columbusartsfestival.org/visit/parking/.